म आफैमा राम्रो होइन, इनरुवा बासीले मलाई राम्रो बनाउनु परो : शीतोष पोखरेल (भिडियो) - inaruwaonline.com
म आफैमा राम्रो होइन, इनरुवा बासीले मलाई राम्रो बनाउनु परो : शीतोष पोखरेल (भिडियो)
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २४, २०७४ समय: १०:०७:०१
इनरुवा अनलाइनको निर्बाचन विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत इनरुवा नगरपालिका वाड.न. ३ का नेपाली कांग्रेसबाट वडा अध्यक्षका प्रतिनिधी शीतोष पोखरेल सँग गरिएको कुराकानीका केहि अंशहरु :
तपाई के कारणले राम्रो उम्मेदवार हो जस्तो लाग्छ ?
मैले आफुलाई आफैले राम्रो भन्दा पनि भोलि निर्बाचनको परिणामले राम्रो भन्दियोस् भन्ने मेरो कुरा हो जाहा सम्म स्थानिय तहको कुरामा शीतोष पोखरेल भनेको निर्नतर एउटा राजनितिककर्मी रुपमा परिचित अनुहार हो भन्ने कुरामा म बिस्वस्त छु। हरेक इनरुवासी संग मेरो एक किसिमको भावनात्मक सम्बन्ध रहेको छ त्यसकारणले पनि म राम्रो हु भन्ने मेरो बुझाई छ।
तपाईको कार्यकर्ताको चुनाव प्रतिको आकर्षण के हो ?
नेपाली कांग्रेसको घोषित कार्यक्रम र नेपाली कांग्रेसले उमेदबारी प्रदान गर्दा खेरी न्याय पुर्ण ढंगले गरेको कारणबाट कार्यकर्तामा एक किसिमको छुट्टै उमंग, उत्साहा देखिएको छ। तेहि ढंगले कार्यकर्तामा नया जोस जागरका साथ नेपाली कांग्रेसको पंक्तिलाई बढाउनुपर्छ भनि कार्यकर्ता लागि रहेको म बुझ्दछु।
चुनावि प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग सम्बन्धमा के भन्नु हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसले बालबालिकाहरुलाई चिनावि प्रचार प्रसारमा काहि पानि प्रयोग गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि कहि कतै अन्य राजनितिक दलहरुबाट प्रयोग भएको छ भने त्यो एकदमै बालबालिकाको हकहित र उनिहरुको बाल अधिकारको हन्न हो भनि म बुझ्दछु यस्ता घटनाहरु नहोस।
पटक पटकको चुनाव सर्नाले स्थानीय जनताको मन र दिमागमा कस्तो खालको भर्म फैलिराखेको जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
पकै पनि यो राम्रो पक्ष होइन, यसमा राष्ट्रियको आर्थिक भार बढ्ने र जनतामा सरकार प्रतिको विश्वासमा ह्रास आउनेकाम भैरहेको छ। कहिले चुनाव होला ? र कहिले चुनाव होलाकि नहोला भनि दुविधामा जनताहरु भैरहेको अवस्थामा यसलाई म पक्कै पनि राम्रो पक्ष ठान्दिन।
तपाईको वडा अध्यक्षको प्रतिनिधी हुनुको उद्देश्य के त ?
जनप्रतिनिधीको काम कर्तव्य के हो भन्ने कुरा यतार्थमा जनताहरु समक्ष प्रत्याभुत गराउनु नै मेरो मुख्य उद्देश्य हो। उद्देश्यलाई कागजीरुपमा सिमित नराखिकन भौतिक विकास, शिक्षा, स्वास्थय जस्ता मुल आधारहरुलाई नया ढंगले जनताका सामुने ल्याउने मेरो योजना हो।
इनरुवाको विकासको सन्दर्भमा तपाईको भनाई के छ ?
यहाका जनप्रतिनिधीहरु जति उतरदाइ हुनुपर्ने हो त्यति उतरदाइ नभएको हो की बिगतका दिनमा भन्ने एउटा कुरा हो तथापी मैले भन्नु पर्दा खेरी जनप्रतिनिधीहरु जुन ढंगले काम गर्नु पर्ने त्यो नगरेको र आफ्नो जिम्मेबारीबाट कतै भडकिएका थिएकि भन्ने मेरो प्रश्न चिन्ह हो र आउदा दिनमा जनप्रतिनिधीहरु जुन उदेश्यका लागि जनता बिचमा गएर आफ्नो प्रतिब्धता राखेर कटिब्ध भई हिड्नुहुन्छ भनि म विश्वस्त छु।
इनरुवा जिल्लाकै सदरमुकाम भएतापनि निकै नै पिछडिएको अवस्थाको यतार्थबाट भाग्न सकिन्न र यसकोलागी जनप्रतिनिधीलाइ अलिकति जागरुक र प्रेरित गर्न स्थानिय बासीहरुको पनि अहम भुमिका हुन्छ। यसम सबै जना लागि परेर गर्ने हो भने पक्कै पनि इनरुवा नगरीको विकास द्रुत गतिमा हुन्छ।
भिडियो सहितको विस्तृत अन्तर्वारताका लागि यहा क्लिक गर्नुहोस